Rome waxay hoy u tahay mid ka mid ah tii jalaato ugu fiican Yurub, Sida Milk. magaaladana waxaa ka buuxa ee jalaato ku caashaqay. Muuqaallo picturesque dadka ku riyaaqayaa gelato yihiin caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, magaalo la dukaamo gelato xad-dhaaf ah, mid u taagan sida a jawharad qarsoon in qof kastoo jecel gelato u baahan yahay inuu soo booqdo. dalxiisayaal tiro iyo dadka deegaanka iyo ido soo Il Latte. Waa maxay samayn kartaa jalaato ay si gaar ah waxaad weydiin laga yaabaa in? marka hore, dad badan ku raaxaystaan ​​dhadhan hodanka ah iyo delicious ay bixiyaan. Waxay diyaariyaan gelato maalin kasta oo isticmaalaan waxyaabaha dabiiciga ah. kareemada ay baraf hodanka iyo shiidan, sida magacaba ka muuqata. Haddii aad ka yaabban wixii Kaalay hab Il Latte, waxaad ku farxi doonaan in ay ogaadaan waxa uu ku tarjumayaa in “Like Milk”. Xitaa dadka neceb caanaha way ku raaxeysan karaan dhadhankooda caano-la'aanta ah. Dhadhan waa mid cajiib ah. Marka labaad, dadka Khayrja jawiga of dukaanka. Waxaa daro ah nuxurka iyo dareenka of Rome.
Jalaatada cajiibka ah maahan wax dad badani la wadaagaan Jarmalka. Si kastaba ha ahaatee, Ballabeni Jalaato halkan waa in la beddelo in la qaado ay cajiib ah. Barafkan barafka fadhiya ee barafka ku yaal wuxuu ku yaalaa Munich oo waxbadan ayuu soo socdaa. qowladda iska leh Giorgio Ballabeni, Grandmaster ah ee farshaxanka ee samaynta jalaato. Wuxuu bilaabay jallaato hiwaayad ahaan, iyo dhammaan Munich waa Mahdin, waayo,. dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka oo badan ayaa jecel dukaanka, ka tagaya faallooyin aan caadi ahayn. Marka aad isku daydo jalaato ay, Ma aha adag tahay in la arko sababta. Waxa ay saxar ay khiyaanada kaamil ah oo waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ay duurka. Ay hamiday yimaado iyada oo loo marayo in qaadada kasta. oo faa'iido dheeraad ah waa in ay leeyihiin ay gaari jalaato iyo tiraan karaan si ay dhinac gaar ah!
Haddii aad waligaa heli karto naftaada in caasimadda ah ee Hungary, loo hubiyo in ay booqdaan Gelarto Rosa. Waxan cajiib ah jalaato waxa ku sugan wadnaha ee Budapest. oo dhan waxay ka mid yihiin oo ku saabsan dhaqan, Shukaansiga, hindiga, iyo hamiday, kaas oo la arki karo in ay shaqadooda. In si kale loo dhigo, ay yihiin khubarada dhabta ah oo duurka ku. Ilaa hadda sida ay ice cream, aad ku farxi doonaa inaan maqlo in ay isticmaalaan oo keliya maaddooyinka organic fiican. dukaan kasta oo ice cream weyn iska ilaalisaa in jalaatada aan dabiici ahayn. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay ka dhigeysaa Gelarto Rosa gaar ah waa hab farsamada si ay u qaabaynta jalaato galay Rose ah. Haddii aad waligaa joogto Szent Istvan Fagaaraha inta lagu jiro maalin kulul, waxaad hubin doontaa inaad arki doontid dad badan oo leh kareemo jalaato u eg oo ubax wareegaya.
Qolka jalaatada ee booqashada ku xigta waa inuu ka yimaadaa Zurich. up waa qowladda jalaato ah in ay heshay Waxyooday Xagga Argentina. Aasaasihii Rofe Bote halkaas ku noolaa mudo labo sano ku qaaday dhaqanka. Waxa uu soo jiitay oo ay Maalmihii, cabdo, iyo jalaatada dabiiciga ah. Waxa uu ahaa sidaas dhicin inuu iyaga ka soo bixiyey inay Switzerland. Maanta waxaa jira laba dukaamada in Zurich, oo waxay u furan tahay in ay xidido Argentinian. music The noole iyo dareenka Latin hubto in ay kor u jinni oo aad xitaa ka sii badan sida aad jeceshahay qaar ka mid ah jalaato delicious. Hasta waa boorish si fiican u dhadhan Argentina iyo xariif Swiss.
Ready in ay la kulmaan dhadhankii iyo dhadhan in Europe leeyahay in ay bixiyaan? Ballansan Your Tigidhada in Tareenku hadda. Ka dib markii in, waxaad la kulmi kartaa adduunka macaan ee jalaatada ku yaal Yurub.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Goobaha Best Si Cun Cream Ice In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-eat-ice-cream-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#is deji #Jalaato #traveleurope eurotrip Foodie